CHRIS GAYLE လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အစားအသောက်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် - ဘောလီးဝုဒ်သရုပ်ဆောင်တွေ
Chris Gayle လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အစားအသောက်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်
အဓိက / ဘောလီးဝုဒ်သရုပ်ဆောင်တွေ
မွေး chandini chowdary နေ့စွဲ
ဂိမ်းဟာအနောက်အင်ဒီးစ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့အချိန်မှာ Chris Gayle အဲဒီနေ့မှာဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာတစ်နည်းနည်းနဲ့နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။ သူသည်အသင်းအတွက်တစ်ကိုယ်တော်ပွဲနိုင်ခဲ့သည်။ သူသည်စမ်းသပ်အဆင့်တွင်သုံးရာစုနှစ်နှစ်ခုမှရရှိခဲ့သောခရစ်ကက် ၄ ယောက်ထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည် ။ သူသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်တောင်အာဖရိကကို ၃၁၇ ကြိမ်နှင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်သီရိလင်္ကာကို ၃၃၃ ခုပြေးခဲ့သည်။ ကျန်သူလေး ဦး မှာ Virender Sehwag, Brian Lara နှင့် Don Bradman တို့ဖြစ်သည်။
ခရစ်သည်စမ်းသပ်ပွဲ၌ပထမဆုံးဘောလုံးကို ၆ ခုထိအနိုင်ယူသောပထမဆုံး batsman ဖြစ်လာသည်။ သူသည်ကမ္ဘာ့ဖလားတွင်နှစ်ရာဂိုးသွင်းနိုင်သည့်ခရစ်ကက်နှစ်ခုအနက်တစ် ဦး လည်းဖြစ်သည်။ သူ၏အမြန်ဆုံးရာစုသည် IPL တွင်ဘောလုံး ၃၀ သာရှိသည်။ ခရစ်သည်စာတတ်သူတစ် ဦး အနေနှင့်ကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံရှိပြီးသူသည်ထိုအနေအထားကိုထိန်းသိမ်းရန်တူညီစွာကြိုးစားသည် ။
သူကအသင့်တော်ဆုံးခရစ်ကက်သမားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူ၏ရိုက်ဂိမ်းသည်အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်သည်။ သူကပြိုင်ဘက်အသင်းကိုအပြင်းအထန်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ပေးပြီးဘောလုံးကိုသူမကိုင်တွယ်နိုင်သောကြောင့်ဘောလုံးကစားသမားများအလွန်ကြောက်ရွံ့သည်။
ထို့နောက်သူကဤမျှလောက်များစွာသောခြောက်လနှိပ်ဆက်လက်ထားရန်နိုင်ခြင်း၏နောက်ကွယ်မှလျှို့ဝှက်ချက်ကိုထုတ်ဖေါ်ဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်, ပထမ ဦး ဆုံးဘောလုံးအပေါ်ပင်ဖိအားမရှိ? သူသည်အဘယ်သို့ပြန်ပြောသနည်း 'ကျနော့်ရိုက်ကဘောလုံးတွေအားလုံးကိုရိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ ငါအခြေအနေအရသိရသည်ကစား။ သင် bowlers လေးစားရန်ရှိသည်။ ဘောလုံးတိုင်းမရိုက်သင့်ပါ။
အောင်မြင်မှုသည်တစ်ညလုံးသင်၏ရင်ခွင်ထဲသို့မကျပါ။ သင်ဤကြံ့ခိုင်မှုအဆင့်ကိုရရှိရန်လုပ်ဆောင်ရမည်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်အသွင်ပြောင်းမှုနှင့်ခရစ်ကတ်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုစီတွင်သူသည်မည်မျှစွမ်းအားထုတ်ပေးသည်ကိုမေးမြန်းခြင်းခံရသောအခါသူက“ ခရစ်ကက်လင်းနို့တစ်လုံးနှင့်အားကစားရုံ၌လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကောင်းရန်သင်လိုအပ်သည် ။ သင်သည်သင်၏ကြွက်သားများကိုတည်ဆောက်ရန်၊ သင်၏ပြင်းထန်မှုကိုလုပ်ဆောင်ရန်နှင့်ပိုက်ကွန်များထဲသို့ဘောလုံးဝင်ရန်လိုအပ်သည်။ ကောင်းပြီ၊ ဒါပေမယ့်ဒါကတစ်ညလုံးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ သင်တကယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးသင်လိုချင်တာအတွက်ကြိတ်ဆုံကိုကြိတ်ပါ။ ”
သူအကြိုက်ဆုံး cardio လေ့ကျင့်ခန်းသည်ကခုန်ခြင်းဖြစ်သည်။
သူ၏အလုပ်ကိုအခြေခံအားဖြင့်ခြေထောက်လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ ကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် abs လေ့ကျင့်ခန်းများကိုအဓိကထားသည်။
batsman သည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းမရှိဘဲအမြင့်ဆုံးပြေးနိုင်ရေးအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သင်ပင်ပန်းလျှင်သင်ထွက်ပေါက်ထွက်ရန်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။ ငါတို့သည်ခရစ်တစ်ရာစုမပါဘဲအိမ်ပြန်ချင်ပါတယ်သူတစ် ဦး မဟုတ်ကြောင်းသိ!
br ambedkar ၏မွေးနေ့
ခရစ်သည်အစားအစာများကိုအစမှဂရုမစိုက်ခဲ့ပါ။ သူကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုသာကိုင်။ စားသည်၊ အထူးသခေါက်ဆွဲ၊ ယခုမူကားသူသည်နည်းနည်း ပို၍ သတိထားမိသည်။ သူသည်အစားအစာတွင်သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များစွာပါဝင်သည်။
ဒါဟာကျန်းမာတဲ့အစပဲ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိအာဟာရဗေဒပညာရှင်များ၏ပြောကြားချက်အရနံနက်စာသည်သင်၏နေ့၏အရေးကြီးဆုံးအစာဖြစ်သည်။ နှင့်ခရစ်အလေးအနက်ထားကကြာပါသည်။ သူသည်တစ်နေ့လုံးအနားယူရန်အားစိုက်ပြီးအားအင်ပြည့်ဝနေစေရန်မည်သည့်နေရာသို့မနက်အိပ်ရာဝင်ပါစေ၊
သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအစာအာဟာရကောင်းကောင်းဖြင့်ကျွေးမွေးခြင်းအားဖြင့်သင်၏တစ်နေ့တာကိုအစကောင်းစေသင့်သည်။ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအလိုအလျောက်လာလိမ့်မည်။ သူသည်သူ၏လေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မီပရိုတိန်းလှုပ်ခြင်းကိုခံယူပြီးသူ၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီးအရည်များများကိုဖျော်ရည်သို့မဟုတ်လင်မနိတ်များဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
Shraddha Musale အမြင့်၊ အလေးချိန်၊ အသက်၊ လင်ယောက်ျား၊
Adhi (Hiphop Tamizha) အသက်၊ ဇနီး၊ ကာ့စ်၊ မိသားစု၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်အခြားအရာများ
Sharad Malhotra အသက်၊ အမြင့်၊ မိန်းကလေး၊ မိသားစု၊
Yashmeen Chauhan (Bodybuilder) အမြင့်၊ အလေးချိန်၊ အသက်၊ အရေးကိစ္စ၊ ခင်ပွန်းသည်၊
Ridhi Dogra အသက်၊ အမြင့်၊ လင်ယောက်ျား၊ မိသားစု၊
shradha kapoor အသက်နှင့်အမြင့်
allu arjun အသစ်ဟိန်ဒီရုပ်ရှင်စာရင်း
daya tarak mehta အမည်ရင်း
sadhana Singh မွေးဖွားခဲ့သည်
vah စားဖိုမှူးအမည်ပြန်လည် vah